Igwe ihe nkedo laser Laserartist CO2 nyere otutu uzo di iche. More vasatail karịa router engravers ma ọ bụ igwe igwe, ndị na-ese ihe laser laser CO2 nwere ike ịme ngwa ngwa na ngwa ngwa ịhazi ihe osisi na ngwaahịa, iko iko ma ọ bụ iko seramiiki, etch na okwute ma ọ bụ plastik.
Arụ ọrụ igwe akara laser ga-eji nwayọ belata mgbe ejiri ya ogologo oge. Kedu ihe kpatara nke a? Gịnị bụ isi ihe na-emetụta ogo laser akara igwe? 1. Baịbụl hiwere isi n'ebe laser akara igwe Ihe gbadoro anya na akara laser ...
Ihe ndị na - emetụta ọnụ ahịa igwecha laser
Aka nke ngwaahịa na-eri: ke ofụri ofụri, ndị na-eri nke ngwaahịa bụghị naanị n'ihi na ihe onwunwe na machining, kamakwa maka R&D, QC, mgbe ahịa ọrụ, pesonel na-eri, atọ ndị na-eri na-eri, isi obodo na-eri na na. Yabụ ị kwesịrị ịtụle ihe ndị ị na-echekarị. Mgbe ị na-ahọrọ àgwà, ...